Nhau dzeBhaibheri: Mambo Wokutanga waIsraeri Anoenda Muutapwa muBhabhironi - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Sauro akava mambo wokutanga waIsraeri. Asi Jehovha akamuramba, nokudaro Dhavhidhi akasarudzwa kuva mambo munzvimbo make. Tinowana zvinhu zvizhinji pamsoro paDhavhidhi. Sepwere, akarwisa Goriati hofori. Pashure akatiza Sauro Mambo ane shanje. Abhigairi akaisvonaka akamudzivisa kuita chinhu choupenzi.
Tevere, tinodzidza zvinhu zvizhinji pamsoro pomwanakomana waDhavhidhi Soromoni, akatora nzvimbo yaDhavhidhi samambo waIsraeri. Madzimambo matatu okutanga alsraeri akabata ushe kwamakore 40 mumwe nomumwe. Pashure porufu rwaSoromoni, Israeri akakamuraniswa kuva maumambo mairi, umambo hwokumusoro nohwezasi.
Umambo hwendudzi 10 hwokumusoro hwakagara makore 257 husati hwaparadzwa navaAsiria. Tevere makore 133 apashure, umambo hwendudzi mbiri hwezasi hwakaparadzwawo. Panguva ino vaIsraeri vakaendeswa Bhabhironi senhapwa. N0kudaro Chikamu CHECHINA chinofukidza makore 510 enhau, munguva umo tinoona zvinoitika zvizhinji zvinofadza zvichipfuura.